कोरोना सँग जुध्न सुन्नै पर्ने गगनको यो भिडियो सन्देश::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
कोरोना सँग जुध्न सुन्नै पर्ने गगनको यो भिडियो सन्देश
त्यसपछि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सदनदेखि सडकसम्म बहस सुरु भयो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र जनचेतनाका लागि देखिनेगरी उपस्थित भए प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापा । सानेपा र बानेश्वरबाट सक्रिय रुपमा लागेका थापा सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यतिकै सक्रिय थिए ।
योबीचमा थापा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत कोरोनाभाइरसका लक्षण र बच्ने उपायबारे सन्देश दिन व्यस्त थिए । १३ फागुनमा उनले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा ‘कोरोना भाइरस के हो ? यो कसरी सर्छ ? यसका लक्षणहरू के–के हुन्छन् ? संक्रमणबाट बच्नका लागि के–कस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ?’ भन्ने भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको आधिकारीक ट्वीटर ह्यान्डलमा मेन्सन गर्दै थापाले अगाडि लेखेका थिए, ‘पीएम नेपाल हामी सरकारलाई प्रश्नमात्रै होइन मद्दत गर्न चाहन्छाैं ।
यस्तो छ थापाले जारी गरेको भिडियो सन्देश